Fitia Boutique sy ny fanalana volo amin'ny Laser - Madagascar Informations
18 janvier 2017 Madagascar Informations Aucun commentaire
Tena mikarakara manokana ireo vehivavy te hanatsara ny bikany FITIA Boutique, Isan’izany ny fampitomboana ny nono sy ny fitombenana. Marihina fa afaka halehibiazina avokoa ny nonony vehivavy rehetra ankoatra ireo mampinono. Tsy mandany fotoana ela ny fikarakarana fa fotoana vitsy monja ary efa misy creme ampiarahana aminy. Toy izay ihany koa ny fikarakarana ny fitombenana ,ary marihina fa mora dia mora ny sarany.
Tsy ireo ihany no fikarakarana hatao eto fa anisany tena mampiavaka azy ihany koa ny fikarakarana ny tarehy izay tsisy hatahorana satria produit naturel avokoa no ampiasaina.
Fa ny tena hafa kely dia ny fanalana volo amin’ny alalany “laser” toy ny an’ity ramose ity izay nanapa-kevitra fa ho esoriny tanteraka ny volombavany satria ao anatiny 3 ka hatraminy 4 andro mantsy hoy izy dia efa maniry ny volombavany ary izay no antony nanesorany azy tanteraka.
Marihina fa in-dray mandeha isan-kerinandro ny fikarakarana hatao,ary arakarakin’ny habetsakin’ny volo ny faharetany, tsy maniry intsony ny volo avy eo ary miha malama sy malefaka ary miha fotsy ny hoditra.
← Ritra ny Rano sy ny Renirano eto Antananarivo
Vavaka hampilatsaka ny orana →
La spiruline de Spirofia